आरजुले बचाएकी कामिनीको जागिर जाने – TajaNepal
प्रम ओलीको कपटी चाल
शेरधन काण्डले बढायो शङ्का
दश अर्बको जङ्गल मासेर विमानस्थल
दरबारमार्ग प्रहरी सक्रिय हुँदा
गच्छदारलाई फाइदै फाइदा
सङ्घीयता नै घाँडो बन्दै
प्रचण्ड र केपीका भित्री कुरा
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई किन चाहियो रमिता ?
प्रहरीमा भयो उलट–पुलट
प्राधिकरण बोर्डमा खञ्चुवा सदस्य
Home /Blog/आरजुले बचाएकी कामिनीको जागिर जाने
आरजुले बचाएकी कामिनीको जागिर जाने
फोरजीको नाममा ग्राहक लुटिँदै
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमभित्रको भ्रष्टाचारले ग्राहक वर्गले त्यो संस्थाको सेवा सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले कार्यकारी निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउन निर्णय गर्दै थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीपत्नी डा. आरजु देउवाको दबाबका कारण उनको पद बच्यो । टेलिकमको गिरोहले बजारमा नआउने केही दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छाप्छ र आफ्नो गिरोहभित्रका ठेकेदारहरूलाई काम दिँदै आएको छ । अहिले कामको स्तरीयता नहुने ग्राहकलाई ठग्ने कामलाई नै महत्व दिएको छ ।
फोरजी सेवा पछिल्लो पटकको भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । अख्तियारमा पुगेका उजुरीहरूको त्यहाँ कुनै खोजीनिती भएको छैन । ‘त्यहाँ राम्रो पैसा खर्च गरिएको छ’– सूत्र भन्छ । मार्केटिङ विभागका लुटाहा अमूल प्रधान हुन्, संस्थागतरूपमा बदमासी गर्ने टिमको नाइके । कुनै योजनासम्बन्धी सूचना विभाग प्रकाशन गर्न उनैको पहलमा गिरोह सक्रिय हुन्छ । बजारमा नदेखिने ठगी खाने उद्देश्यमा केन्द्रित गिरोहले राष्ट्रिय दैनिकको नाममा सूचना सम्प्रेषण न्यून वितरण सीमित भएका पत्रिकामा विज्ञापन छपाउँछ । अख्तियारका उजुरी पैसाले छानबिन नगरेको हो । नेपालमा अख्तियार बदनाम हुनुको कारण पनि यही हो ।
नेपाली सेनाको सूचना सेनामा बुझाउने प्रतिमा मात्र छाप्ने तर अरू प्रतिमा नछाप्ने गरे जस्तै टेलिकमको मार्केटिङ योजना प्रशासन इन्जिनियरिङ फाँटमा बुझाउने प्रतिमा मात्र विज्ञापन छापिन्छ, त्यही पत्रिका त्यही अङ्क बजारमा पुगेको सीमित प्रतिमा विज्ञापन हुँदैन । त्यस्तै सूचना टेलिकमको नाममा छापिएको हुन्छ । त्यसको खोजी कसैले गर्दैन । बिल पुग्छ, बाँडिन्छ बराबर । दिउँसै रात पार्ने छद्मभेषी गिरोहको कमाण्ड गरेकी कामिनी राजभण्डारीलाई माओवादीको साथमा टेलिकमको कार्यकारी बनाइएको हो । खरिद नभएका सामानको भुक्तानी गर्ने अपराध त त्यहाँ धेरै भएका छन् । पत्रकारका नाममा केही दलालहरूलाई पालेर कामिनीको गिरोहले सबैभन्दा बदमासी गरेको पछिल्लो चरणको फोरजी सेवा नै हो । कमिनीका विश्वासपात्र प्रदीप ठाकुर हुन् । यो टिमसँग मोहन बस्नेतले राम्रैसँग झारेका हुन् ।
टेलिकमको यो गिरोहले व्यक्तिका घरजग्गामा टावर स्थापना गर्दा भाडा तिर्न आलटाल गर्छ । भूकम्पका बेला उपत्यकाभित्र टेलिकमको टावरका कारण थुप्रै घर नष्ट भए । कमिसन रहेको ठाउँमा यो गिरोहले राख्छ । घर भाडा दर कायम गर्दैमा छुट्ट्याइएको रकम लिएर पनि चित्त नबुझाउने मार्केटिङका अमुल प्रधानको खञ्चुवा टिमले फोरजी सेवाको नाममा संस्थागत नोक्सानी चर्काएको हो । टेलिकमको लगानीअनुसार ग्राहक तथा उपभोक्ताले सहजरूपमा प्रयोग गरेका छैन । फोन ह्याक गर्ने र डाटाबाट ठग्ने काम चर्को छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत आफूले धुत्न पाएपछि गुणस्तरीय सेवाको चासो दिँदैनन् । टेलिकमको भ्रष्टाचारमा सञ्चार सचिव पनि सहभागी भएका हुन्छन् । संस्थानको भ्रष्टाचारमा मन्त्री, सचिवको नजर नपरोस् भनेर गाडी उपहार दिलाउने यो गिरोहको परम्परा बसेको छ । नेपाल टेलिकमको आन्तरिक सुधारमा सञ्चारमन्त्री, मन्त्रालयले मात्र होइन, टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी दूर सञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा निगरानी राख्नु जरुरी छ । सरकारी संस्थान भएकाले सरकारलाई दिनुपर्ने कर रोयल्टी राजस्व जस्ता विषयमा नेपाल टेलिकमले ठग्न सक्दैन । तर ग्राहकलाई सताउने प्रवृत्ति हटेको छैन । व्यवस्थापनमा क्षमता थियो भने प्रिपेड सापटी पहिले किन सुरु गरिएन ?
सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । उनी खरो स्वभावका सञ्चारकर्मी हुन् । व्यक्तिको स्वार्थसँग संस्थागत ब्रम्हलुट हुने नेपाल टेलिकमको भद्रगोल यिनले गहिरिएर बुझ्न पाउँदैनन् । किनकि मन्त्रालयमै गिरोह छ । माओवादीले पैसा खाए काँग्रेसका चोट्टा मोहन बस्नेतलाई त पैसा मात्र होइन, गाडी सुविधा दिएर आफ्नो स्वार्थमा दायाँ–बायाँ हुन दिइएको थिएन भने यी गोकुलको के कुरा भन्ने गिरोह पनि त्यहीँ छ । राज्यमन्त्री बास्कोटाले लामो समयदेखि पत्रकारले उठाउँदै आएका समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि, आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको गठन जस्ता दीर्घकालीन कार्ययोजनामा समेत ध्यान दिनु छ । जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृद्धिको क्रमलाई सरकारको तहबाट साथ मिलोस् भन्ने चाहना महासङ्घको थियो । सञ्चार मन्त्रालयभित्र नेपाली प्रेसमैत्री व्यूरोक्रेसी छैन भन्ने हेक्का राख्न पनि आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई किन चाहियो…
प्रम ओलीको कपटी चाल November 14, 2018
शेरधन काण्डले बढायो शङ्का November 14, 2018
दश अर्बको जङ्गल मासेर विमानस्थल November 13, 2018
© 2018 Theme by Taja Nepal